ဗြိတိန်ပြည်သူ့လီမိတက်ကုမ္ပဏီ (PLC) ကမ်းလွန်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
တစ်ဦးကဗြိတိန်ပြည်သူ့လီမိတက်ကုမ္ပဏီ (PLC) သာ. ကြီးမြတ်ဂုဏ်သိက္ခာ, မြို့တော်ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူလက်လှမ်းနှင့်အများပြည်သူကြော်ငြာရှယ်ယာရောင်းဖို့စွမ်းရည်ပေးထားပါတယ်။ ဒါဟာလုံးဝနိုင်ငံခြားသားများကပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။
တစ်ဦး PLC လူသိရှင်ကြားတစ်စတော့အိတ်ချိန်းမှတဆင့်၎င်း၏ရှယ်ယာများကိုရောင်းချနိုင်ပါတယ်နေစဉ်, များစွာကိုပုဂ္ဂလိကပိုင် PLC ရဲ့ငွေကြေးနှင့်အရင်းအနှီးရရှိရန်နောက်ထပ်အခွင့်အလမ်းများကမ်းလှမ်းသောအပို status ကိုများအတွက်လည်ပတ်။
အဆိုပါ PLC အများသုံးစတော့အိတ်ချိန်းတွင်၎င်း၏ရှယ်ယာများကိုရောင်းချနိုင်မယ့်ကုမ္ပဏီအတွက်ပုံမှန်မဟုတ်သောအရာကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကိုအကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ်။ ဤသည်ရှယ်ယာရှင်ရဲ့ liabilities အဆိုပါ PLC ကျခံရလိမ့်မည်သည့်မဆို liabilities ကနေသူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပိုင်ဆိုင်မှုကာကှယျဖို့ရှယ်ယာမြို့တော်မှ၎င်းတို့၏ပံ့ပိုးမှုများကိုဖို့ကန့်သတ်ကြသည်ကိုဆိုလိုသည်။
UK မှာပုံမှန် PLC တစ်လက်လီကွင်းဆက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကြီးမားသောထုတ်လုပ်သူများကဲ့သို့ကြီးမားသောလူသိများတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်နေစဉ်, လူတစ်ဦးပုဂ္ဂလိကပိုင်န့်အသတ်တာဝန်ယူမှုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ PLC ဖွဲ့စည်းရန်နှင့်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်၎င်း၏ရှယ်ယာများကိုရောင်းချရန်သို့မဟုတ်နိုင်ပါတယ်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်ပြည်သူ့လီမိတက်ကုမ္ပဏီများ 2006 ၏ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေအားဖြင့်အုပ်ချုပ်နေကြသည်။
•ငွေကြေး၏နောက်ထပ်သတင်းရင်းမြစ်တစ်ဦးကပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီထက် PLC မှမရရှိနိုင်ပေမည်။ သူတို့ပုဂ္ဂလိကသူတွေကိုအဘို့ပြုထက်ဘဏ်များနှင့်အခြားဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများစာရင်းအများပြည်သူကုမ္ပဏီများအဖို့ပိုပြီးငွေကြေးထောက်ပံ့တိုးချဲ့။
•ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများထက်ပိုကောင်းတဲ့အသုံးအနှုန်းများအပေါ်ပိုပြီးငွေကြေးထောက်ပံ့မြှင့်ရန်စွမ်းရည် PLC အသစ်သောထုတ်ကုန်များနှင့်ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်အတူသစ်ကိုစျေးကွက်လိုက်စားပိုကောင်းတိုးချဲ့အခွင့်အလမ်းများနှင့်အတူကြီးထွားဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
ဂရိတ်ဗြိတိန်နှင့်မြောက်အိုင်ယာလန် "ဗြိတိန်နိုင်ငံ" အဖြစ်လူသိများဒါမှမဟုတ် "ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း" အင်္ဂလန်, ဝေလနယ်, စကော့တလန်နှင့်အိုင်ယာလန်၏အစိတ်အပိုင်းများလည်းပါဝင်သည်နေကြသည်။ နိုင်ငံရေးအရ, တကဧကရာဇ် (Queen Elizabeth II) တစ်ဦးရွေးချယ်တင်မြှောက်ပါလီမန်နှင့်၎င်းတို့၏န်ကြီးချုပ်နှင့်အတူတစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်းပါလီမန်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနစ်စဉ်းစားသည်။
ဗြိတိန်ပြည်သူ့လီမိတက်ကုမ္ပဏီ (PLC) အကျိုးကျေးဇူးများ
• လုံးဝနိုင်ငံခြားသားများအားဖြင့်ပိုင်ဆိုင်: PLC ရဲ့လုံးဝနိုင်ငံခြားသားများကပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။
• ကန့်သတ်တာဝန်ဝတ္တရား: ရှယ်ယာရှင်များတာဝန်ယူမှုကိုရှယ်ယာမြို့တော်မှ၎င်းတို့၏ပံ့ပိုးမှုများကို၏တန်ဖိုးကိုကန့်သတ်သည်။
• ရိုးရှင်းသောမှတ်ပုံတင်ခြင်း: မှတ်ပုံတင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ရိုးရှင်းပါသည်။
• တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်များ: တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်တစ်ဦး PLC ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
• နှစ် ဒါရိုက်တာများ: နှစ်ခုသာဒါရိုက်တာများလိုအပ်သည်။
• အနိမ့်နိမ့်ဝေမျှမယ်မြို့တော်: အစပိုင်းမှာနှစ်ခုသာရှယ်ယာလိုအပ်သည်။
• အဆိုပါစတော့အိတ် Market ကမှဝင်ရောက်ခွင့်: တစ်ဦးက PLC ကိုပိုမိုရိုးရှင်းစွာနဲ့အခြားဗြိတိန်ကော်ပိုရေးရှင်းထက်အများပြည်သူမှ၎င်း၏ရှယ်ယာများကိုကြော်ငြာနှင့်ရောင်းဖို့လူထုလန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်းကိုဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
• ဥပဒေရေးရာနှင့်နိုင်ငံရေးစနစ်များ Secure: ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရဲ့ဥပဒေရေးရာနှင့်နိုင်ငံရေးစနစ်များကိုလုံလုံခြုံခြုံနဲ့တည်ငြိမ်ခဲ့ရာစုနှစ်ရှိသည်။
ဗြိတိန်ပြည်သူ့လီမိတက်ကုမ္ပဏီ (PLC) အမည်
UK ရှိတစ်ဦးက PLC အခြားမှတ်ပုံတင်ထားသောကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်ကုမ္ပဏီများ၏အားလုံးထံမှထူးခြားသောသောကုမ္ပဏီအမည်အားရွေးချယ်ရပါမည်။
"ဦးပိုင်လီမိတက်" ကဲ့သို့စကားလုံးများ, "အင်တာနေရှင်နယ်" နှင့် "အုပ်စု" အထိခိုက်မခံခြင်းနှင့်အချို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုကုမ္ပဏီနာမတော်၌ထိုစကားမြားကိုအသုံးပွုဖို့တွေ့ဆုံခဲ့ရမည်ဖြစ်သည်ဟုယူဆနေကြသည်။
အဆိုပါအတိုကောက် "PLC" ဟုအဆိုပါကုမ္ပဏီ၏အမည်ကိုအဆုံးတွင်ပါဝင်သည်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကုမ္ပဏီအများပြည်သူတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်တစ်ဦးအလွန်ကြီးမားတဲ့တဦးတည်းဖြစ်အံ့သောငှါ၎င်းအထင်အမြင်ကိုငါပေးမည်။
ရှယ်ယာရှင်များတာဝန်ယူမှုကိုရှယ်ယာမြို့တော်မှ၎င်းတို့၏စုစုပေါင်းအလှူငွေ၏တန်ဖိုးကိုကန့်သတ်သည်။ ဤသည်တာဝန်ယူမှုကိုသူတို့ရဲ့ရှယ်ယာအပေါ်တစ်စုံတစ်ရာမရတဲ့ပမာဏမှကိုတိုးချဲ့။ အဆိုပါစီမံခန့်ခွဲမှုကိုလည်းရှယ်ယာရှင်များထက်အငယျဆုံးသောအတိုင်းအတာအထိဖြစ်သော်လည်းကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုအနေဖြင့်ကျေးဇူးပြုတတ်၏။
အဆိုပါမှတ်ပုံတင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ် PLC များအတွက်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ကိုယ့်ကုမ္ပဏီ၏ရည်ရွယ်ချက်, မြို့တော်, နှင့်ကုမ္ပဏီများအိမ်မှာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ရှင်းပြရမယ်ထားတဲ့အစည်းအရုံးများ၏ဆောင်းပါးများ file ။ မှတ်ပုံတင်ပြီးတော့လက်မှတ်ထုတ်ဝေသည့်ကုမ္ပဏီများအိမ်ကအတည်ပြုသည်တိုင်အောင်အဘယ်သူမျှမစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကောက်ယူနိုင်ပါတယ်။
ထို့အပြင်လန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်စာရင်းခံရဖို့နိုင်ရန်အတွက် PLC ကအနည်းဆုံး 50,000 GBP ရှယ်ယာမြို့တော်ခွင့်အာဏာနှင့်လန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်း၏ဖိုင်တွေနဲ့ထုတ်ဖော်လိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံနှင့်အတူတစ်ဦးအများပိုင်ကုမ္ပဏီအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ထားသည်။
လန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်စာရင်းတိုင်းကုမ္ပဏီတစ်ခု PLC ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, Rolls-Royce Holdings က PLC ကို၎င်း, ကြီးမားတဲ့ရေနံကုမ္ပဏီဗြိတိန်ရေနံ PB PLC အဖြစ်စာရင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
လန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်စာရင်းတိုင်းကုမ္ပဏီတစ်ခု PLC ဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, မရတိုင်း PLC ဖော်ပြထားသောခံရဖို့ရွေးချယ်ပါတယ်။
တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်တစ်ဦး PLC ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
ကနဦးက, PLC ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ရေးအပေါ်သို့နှစ်ခုရှယ်ယာထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ထို့နောက်သူက 01 ရှယ်ယာအထိထုတ်ပေးနိုင်တော့မည်တစ် SH12,500 ပုံစံ file ပါလိမ့်မယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ PLC ကုန်သွယ်မတိုင်မီကုန်သွယ်ရေး၏လက်မှတ်ထုတ်ပေးတံ့သောကုမ္ပဏီများအိမ်နှင့်အတူတစ်ဦး SH50 ပုံစံ file နိုင်ပါလိမ့်မည်ကိုစတင်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ PLC ရှယ်ယာတန်ဖိုး 25% သို့မဟုတ် 50,000 GBP ၏နိမ့်ဆုံးအခကြေးငွေထားပြီးကြောင်းကိုအတည်ပြုရမည်။
အမြတ်အစွန်းပုံမှန်အားခွဲဝေအဖြစ်ရှယ်ယာရှင်များမှဖြန့်ဝေနေကြသည်။ သို့သော် PLC ရဲ့ယင်း၏အလုပ်လုပ်မြို့တော်အဖြစ်အမြတ်အစွန်းတစ်ဦးသောအဘို့ကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။
အစုရှယ်ယာလွှဲပြောင်းပုဂ္ဂလိကကော်ပိုရေးရှင်းသည်ထက်တစ် PLC ဘို့အများကြီးပိုလွယ်သည်။ ဒါကရှယ်ယာ သာ. ကြီးမြတ်ငွေဖြစ်လွယ်စေပါတယ်။
တိုင်း PLC ကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခွဲဖို့ကအနည်းဆုံးနှစ်ခုဒါရိုက်တာများရှိရမည်။ သူတို့ဟာ 16 အသက်ကျော်သည့်သဘာဝပုဂ္ဂိုလ်များရှိနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတျ, တဦးတည်းကသဘာဝလူတစ်ဦးဖြစ်ပြီးကျန်ကုမ္ပဏီများသည်နိုင်ပါတယ်။ ရှယ်ယာရှင်များဒါရိုက်တာအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရနိုင်ပါ။ ဒါရိုက်တာကတော့ PLC များအတွက်တရားဝင်တာဝန်ရှိသည်။ ဒါရိုက်တာများ၏အမည်များနှင့်လိပ်စာများကိုကုမ္ပဏီများအိမ်နှင့်အတူအများပြည်သူမှတ်တမ်းများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
တိုင်း PLC ကုမ္ပဏီအတွင်းရေးမှူးကိုခနျ့အပျရမယျ။
တိုင်း PLC ထိုကဲ့သို့သောဝေလနယ်သို့မဟုတ်အင်္ဂလန်သည်အတိုင်း, PLC မှတ်ပုံတင်သည်အဘယ်မှာရှိတူညီယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနိုင်ငံတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကုမ္ပဏီလိပ်စာရှိရမည်။
PLC ရဲ့အမြတ် (သို့မဟုတ် taxable ဝင်ငွေ) ဝင်ငွေဟာ HM အခွန်ဝန်ကြီးဌာန & အကောက်ခွန် (HMRC) နဲ့အခွန်ပြန်လာ file နှင့်ကော်ပိုရိတ်အခွန်ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းကို 19% ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, တစ်စုံတစ်ရာ VAT, etc အလုပ်ရှင်ရဲ့ငွေလက်ခံသူ, ဆောက်လုပ်ရေးစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအစီအစဉ်, နှစ်တိုင်း HMRC မှပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာလည်းနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတစ်ဦးကိုယ်ပိုင်အကဲဖြတ်အခွန်ပြန်လာ file ရန်လိုအပ်သည်။
တိုင်း PLC သည့်ရှယ်ယာရှင်များအနေနဲ့နှစ်စဉ်ယေဘုယျအစည်းအဝေးကျင်းပရန်ရှိရပါမည်။
PLC ရဲ့ကုမ္ပဏီများအိမ်နှင့်အတူနှစ်စဉ်ပြန် file ရမည်ဖြစ်သည်။ ကင်းလွတ်ခွင့်ရမဟုတ်လျှင်စာရင်းစစ်ဆေးရမည်ဖြစ်သည်သောကုမ္ပဏီများအိမ်နှင့်အတူနှစ်စဉ်အကောင့် File ။
အဆိုပါ PLC များ၏စီမံခန့်ခွဲမှုသို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာမှမဆိုအပြောင်းအလဲများရှိပါသည်လျှင်ထို့အပြင်ဒါရိုက်တာကုမ္ပဏီများအိမ်နှင့်အတူပြင်ဆင်ချက် file ရမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ဦး PLC များအတွက်ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကုမ္ပဏီများမှရရှိနိုင်မရှိကြပေ။
ဗြိတိန်ပြည်သူ့လီမိတက်ကုမ္ပဏီများနှင့်တူအများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်ကိုခံစား: နိုင်ငံခြားသားများအားဖြင့်ပြီးပြည့်စုံသောပိုင်ဆိုင်မှု, ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှု, ရိုးရှင်းသောမှတ်ပုံတင်ရေး, လိုအပ်သောတစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်နှစ်ခုဒါရိုက်တာများလိုအပ်သော, အနိမ့်နိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော်, လုံခြုံဥပဒေရေးရာနှင့်နိုင်ငံရေးစနစ်များ, နှင့်အင်္ဂလိပ်တရားဝင်ဘာသာစကားမှာဖြစ်ပါတယ်။